Nafahana Daholo Izao ny Vavolombelon’i Jehovah Tsy Manao Miaramila any Korea Atsimo
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Cebuano Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Koreanina Tiorka Tseky Vietnamianina Yorobà
Ny sasany amin’ireo rahalahy 65 nafahana talohan’ny fotoana, taorian’ilay didy navoakan’ny Fitsarana Tampony tany Korea. Nilaza io didy io hoe tsy heloka bevava ny fandavana tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretana.
7 MARTSA 2019
Nafahana tamin’ny 28 Febroary 2019 ilay Vavolombelon’i Jehovah sisa nigadra tany Korea Atsimo. Anisan’ireo nogadraina mantsy izy satria tsy manao miaramila. Naneho ny fankasitrahany lalina ireo rahalahy rehetra nafahana ary faly izy ireo satria afaka nampiseho hoe tsy nivadika tamin’i Jehovah Andriamanitra.
Rahalahy 65 no nafahana taorian’ilay didy manan-tantara navoakan’ny Fitsarana Tampony, tamin’ny 1 Novambra 2018. Milaza mantsy io didy io hoe tsy heloka bevava ny fandavana tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretana. Nandritra izay 65 taona lasa izay dia gadraina foana ny olona tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Tsy gadraina intsony anefa izao ny olona toy izany noho io didim-pitsarana io.
Vao mainka isika sahy tsy hivadika amin’ny Mpanjakantsika sy ny Fanjakany sady hanohy ny fanompoana, rehefa mieritreritra an’ireo rahalahy any Korea izay nanam-pinoana sy tsy nivadika mihitsy. (Filipianina 1:14) Mivavaka ho an’ireo rahalahintsika mbola migadra any Érythrée, Rosia, Singapour, ary Turkménistan isika.—Hebreo 10:34.